Mayelana NATHI - YIXIAN LONGSHAN STONE MATERIALS CO., LTD
Itshe le-Longshan lamiswa ngo-1988, linenhlokodolobha ebhalisiwe eyi-10millon yuan. Itholakala eYixian, eBaoding City, e-Hebei eChina.
Ifektri ine-workshop yokukhiqiza yesimanjemanje, imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme, izindawo zokusebenza ezisebenza kahle, ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kwesilayidi semvelo esingamamitha-skwele angama-500,000, amathani ayi-20,000 amatshe ayigugu, amamitha ayizinkulungwane ezingama-40,000 egwadle, imali engenayo yonyaka engu- $ 3 million.
Imikhiqizo ethengisela i-Italy, iJalimane, iCanada, iJapan kanye namazwe angaphezu kwama-50 kanye nezasekhaya ezinkulu. Ngokusebenza kanzima iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu, iLongshan isiphenduke isisekelo sokukhiqiza isileyiti. Amakhasimende angaphandle acabange ukuthi kuwumkhuba ukuthenga isileti kusuka eChina, bese eya eYixian, eLongshan kuphela.
Ngo-2000, u-Longshan udlulile ukuqinisekiswa kwe-ISO9001: 2000 yamazwe omhlaba okokuqala endaweni yesilayidi futhi imikhiqizo yamatshe evela e-longshan idlulise umuntu wesithathu we-HK ITS ukuhlolwa. ILongshan Stone iyaphumelela ukuvalela i-Birds'Nest Stadium yase-Beijing Olympic Games ngo-2008 futhi yanikezela ngamamitha-skwele ayi-10,000. Itshe le-Longshan lithole ukunconywa okuphezulu kumakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nedumela elithembekile.
Itshe elivela eLongshan laxhashazwa kudiphozi yamatshe eyakhiwa izigidigidi zeminyaka eyedlule. Ikhwalithi yayo yokuqina ngokuqinile inqume amandla ayo okugoba okuphezulu, ukumelana nengcindezi, ukungqina kokuqina kanye nokumelana nokubola. Itshe leLongshan libizwa njengezinto zokuhlobisa eziluhlaza ngenxa yokuqukethwe kwalo okuphansi kwemisebe eqhathanisa nezinga elijwayelekile leThe International Commissionon on Radiological Protection. Imikhiqizo yamatshe inemibala egqamile nezakhiwo ezithile zesendlalelo nezitayela ezahlukahlukene, njengamathayili, itshe lamakhowe, itshe lophahla, unamathisela inetha, itshe lamasiko, i-mosaic, i-granite njalonjalo. Futhi zisetshenziswa ezakhiweni zomphakathi, izindlu zezindlu, amagceke, izingadi nakwezinye izinto ezakhiwe kabanzi, zikhanyisa izakhiwo ukuthi zibe zinhle futhi zilethe abantu endaweni yemvelo, kanye nohlobo lwezinto zokwakha ezihlotshisiwe zesimanje nezimfashini.
Itshe laseLongshan selisungule futhi laklama okukhethekile okusha kweYizhou-Pretty Spring, E-Chinese Meiquanshi ngokuqonda okungaphezulu kweminyaka engamashumi amabili nocwaningo. futhi uhlonishwe amalungelo obunikazi kazwelonke angama-25. Lolu hlobo lweHumidifier-Spring lungalawula umswakama endaweni enhle kakhulu yomzimba womuntu ngamanzi asetshenziswayo, aphuphuma ngokwemvelo, ngomsebenzi wokumiswa kokuxolelwa, ukwesekwa kwamanzi futhi ahlanzayo. Manje uLongshan Stone uyethule wayimaketha, futhi uzuze idumela elihle kakhulu.
Ngokuzayo, uLongshan Stone uzohlala ehambisana nomgomo 'wokuphatha abantu ngokwethembeka, ukusebenza kanzima ngenhliziyo, ukuphishekela ikhwalithi ephezulu nokusebenza kahle, ngokususelwa kuzikweletu ezinhle' futhi ubambisane ngobuqotho nangokubanzi namakhasimende asekhaya naphesheya.